Ifulethi elincane elibukekayo endlini yasemapulazini enhle - I-Airbnb
Ifulethi elincane elibukekayo endlini yasemapulazini enhle
Porta Westfalica, Nordrhein-Westfalen, i-Germany
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Julia Marie
U-Julia Marie Ungumbungazi ovelele
Ifulethi lethu elincane elinefenisha elinothando litholakala epulazini elidala elizungezwe amasimu namadlelo. I-orchard eseduze esabalele onqenqemeni lwehlathi ikumema ukuthi uhlale futhi uphumule. Jabulela isikhathi esimnandi nazo zonke izinzuzo nomoya ontofontofo.
Ngenxa yezimo ezingokomzimba, indawo yethu yokuhlala ayizifanele izingane ezingaphansi kweminyaka emithathu.
Ifulethi linakho konke okudingekayo futhi linikeza ukuphela okuncane kwezobuchwepheshe, njengomsakazo omncane we-Bluetooth egumbini lokugezela, ongalalela umculo wakho owuthandayo ngeselula kanye nesistimu yomculo endaweni yokuphumula. I-Wifi ne-Sky nakho kuyatholakala. Indawo yaphansi yesakhiwo enesitofu sayo esinamathayili nayo ingasetshenziswa, kanye nethala kanye nengadi yama-orchard esabalele. Ukuchitheka kwamabhayisikili kuyatholakala futhi engadini eseduze yezitshalo bamukelekile ukuzinikeza izithako ezintsha.
Amanani obusuku ngabunye asethwe endlini. Umbhede wesofa ovulekayo ungathatha abantu abangaba ngu-2. Indawo yokulala inokuphakama kophahla okuyi-130 cm.
Sixhumene kahle ne-Massachusetts. Amadolobhana ase-Minden, anesiphambano somzila wamanzi, i-Porta Westfalica nesikhumbuzo se-Kaiser-Wilhelm kanye nenqaba ye-TV. I-Bückeburg enesigodlo sayo kanye nesikole sokugibela ipulazi kanye ne-Rinteln, idolobha elisezithombeni, ne-Doktorsee, liseduze. I-Wiehen neWesergebirge ikumema ukuthi wenze ukuhamba okubanzi noma ukugibela amabhayisikili. E Kleinngerremen kukhona eyami, engavakashelwa ngaphansi komhlaba. Isitimela esingokomlando sikuhambisa emzileni omuhle kakhulu esifundeni. Izindlela zamabhayisikili ze-Weser zikumema ukuthi wenze uhambo olubanzi.
Ibungazwe ngu-Julia Marie
Phakathi nokuhlala kwakho sihlezi sikhona futhi siyakujabulela ukusiza. Sizojabula futhi ukwabelana ngamacebiso ezenzakalo ezinhle, okuvelele okuthakazelisayo nemisebenzi ethokozisayo.
UJulia Marie Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Porta Westfalica namaphethelo